पार्टीको निर्देशनले हामी धर्मसंकटमा परेका छौं - वसुन्धरा हुमागाईं (नेकपा सांसद, प्रदेश ३) | Kendrabindu Nepal Online News
11220643 529630 4326579 6364434
२४ पुष २०७६, बिहीबार १२:१५
यतिबेला प्रदेश नं. ३ को नाम र स्थायी राजधानीको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले प्रदेश सभाको क्षेत्राधिकार मिच्दै स्थायी राजधानी हेटौंडा र नाम वागमती नै राख्न आफ्ना सांसदहरुलाई ठाडो निर्देशन दिएपछि नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्यहरु असन्तुष्ट बनिरहेका छन् । नाम वागमती नै होस् तर राजधानी भने काभ्रे वा हेटौंडाको अर्को विकल्प खोज्नु पर्नेमा एकाथरी सांसद छन् भने अर्काथरी नाम र राजधानी नै हेटौंडा र वागमती नभई यसको विकल्प खोज्नु पर्ने बताइरहेका छन् । प्रदेश ३ को नाम र राजधानीका विषयमा केन्द्रित रहेर यसपटक हामीले नेकपाबाट प्रदेशसभाका लागि निर्वाचित सांसद बसुन्धरा हुमागाईंसँग कुराकानी गरेका छौं । हुमागाई काभ्रे क्षेत्र नं. २ (ख) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । प्रस्तुत छ, केन्द्रबिन्दुका वरिष्ठ उपसम्पादक ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपीले हुँमागाईंसँग गरेको कुराकानी-
प्रदेश नं. ३ को नाम र राजधानीको टुंगो पहिल्यै हुनुपर्ने होइन र ? २ वर्षसम्म अझै विवाद छ किन ?
हामीले २२ महिना अघि नै यसको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका हौं । त्यतिबेलै पनि राजधानी काभ्रे सार्नु पर्नेमा हाम्रो जोड थियो । यो अडान अहिले पनि छ । जहाँ सम्म २ वर्ष किन लाग्यो भन्ने सवाल छ, यसमा हामी चुकेकै हो । यो पहिले नै टुंगो लाग्नु पर्ने हो । अन्य विषयमा कुरा गरियो तर नाम र राजधानीमा निर्णय गर्न सकिएन ।
काभ्रे नै किन त ? राजधानी हुन लायक के छ त्यस्तो काभ्रेमा ?
प्रदेशको राजधानी जस्तो विषय सबैलाई पायक पर्ने र सजिलो हुने ठाउँमै कायम गरिनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । काभ्रे केन्द्रीय राजधानीबाट पनि नजिक छ । सडकको कुरा गर्नु पर्दा पनि काभ्रेमा २ वटा ठूला राष्ट्रिय राजमार्गहरु (अरनिको र विपी मार्ग) जोडिएका छन् । रामेछापदेखि चितवन होस् वा रसुवादेखि सिन्धुपाल्चोक सबैको पायक पर्ने ठाउँ काभ्रे नै हो । अन्य सुविधाले पनि काभ्रे उपयुक्त छ । त्यसैले हाम्रो जोड काभ्रे नै हुनुपर्छ भन्ने हो ।
पार्टी नेतृत्वको निर्देशनमा तपाईंहरुको असन्तुष्टि चाहिं नाममा हो कि राजधानीमा?
वागमती नाममा हाम्रो असन्तुष्टि होइन । हुन त यसमै फरक मत राख्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । कसैले तामसालिङ वा नेवा प्रदेश राख्नु पर्ने बताइरहनु भएको छ । तर वागमती नै नाम उपयुक्त छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर स्थायी राजधानी चाहिं हेटौंडा पुग्न छोटो सडकको अवस्था जोखिम लगायत विविध कारणले सबैलाई अपायक पर्ने भएकाले हामीले सार्नु पर्छ भन्दै आएका हौं । सार्नु पर्छ भन्नेमा अधिकांश सांसदहरु सहमत हुनुहुन्छ तर पार्टीको निर्देशनले हामी धर्मसंकटमा परेका छौं । अन्तिम समयसम्म पनि हामी हाम्रो अडान छोड्ने पक्षमा छैनौं ।
नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वले किन हेटौंडा नै अन्तिम विकल्प देख्यो त ?
२ वर्ष सम्ममा हेटौंडामा सबै प्रदेशका लागि चाहिने संरचना निर्माणमा धेरै खर्च भइसकेको छ । हामीले बुझेसम्म अर्को ठाउँमा केन्द्र सार्दा फेरि त्यहि खर्च दोहो¥याउने पक्षमा पार्टी नेतृत्व छैन । अरु आन्तरिक विषय पनि होलान्, सबै त हामीलाई पनि पार्टीले भनेको छैन । यति मात्र भनेको छ कि नाम र राजधानी चाहिं पार्टीले भने अनुसार नै हुनु पर्छ । तर त्यसमा हामीले मानेका छैनौं । संसदीय प्रणाली अनुसार जे हुन्छ त्यो त मान्नै पर्ने बाध्यता पनि हामीलाई छ ।
अब आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कि पार्टीको निर्देशन मान्ने त ?
हामीहरु यतिबेला धर्मसंकटको अवस्थामा छौं । अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो प्रयास काभ्रेमै राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने नै हो । यसको पक्षमा दुईतिहाई भन्दा वढी मत छ । तर पार्टी नेतृत्वले प्रदेशसभाको अधिकार मिचेको प्रति हाम्रो असन्तुष्टि हो । हामीले हिजो जनता सामू बोलेको कुरा जे हो त्यो अडान कायमै छ । भोलि फेरि हामी त्यहिंका जनतासम्म पुग्नु छ । पदको लोभ छैन, सकेसम्म हामी हाम्रो विवेक प्रयोग गर्नेछौं ।
5 Question, basundhara humagain, kavre
Prevआज दिउँसोबाट घाम लाग्ने, यस्तो छ आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले २० करोड घुस मागेको दुर्गा प्रसाईंको आरोप (भिडियोसहित)Next
राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुगे शितल निवास
पार्टी बैठकका एजेण्डा र संसद अधिवेशन नितान्त फरक हो–मन्त्री अर्याल